प्रेम : कतै छिटा, कतै बाछिटा !
लेखक : नवीन प्यासी
प्रेमबिना यो संसार कस्तो हुन्थ्यो होला ! सायद, मान्छेहरू मान्छेजस्ता हुँदैनथे होलान् । मान्छेको परिभाषा अर्कै हुन्थ्यो होला । मान्छे कुनै प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि राखिएको रोबोटजस्ता हुन्थे होलान् । कुनै व्यस्त चोकमा उभिएका शालिकजस्ता हुन्थे होलान् । कुनै कपडा पसलमा उभिएका डमीजस्ता हुन्थे होलान् । कुनै खेत या फाँटहरूमा उभ्याइएका बुख्याँचाजस्ता हुन्थे होलान् । कुनै निर्जन टापुमा भेटिने चट्टानजस्ता हुन्थे होलान्, जहाँ झ्याउहरू पनि उम्रिन अनकनाउने गर्छ ।
मृत्युको अन्तिम ढोका ढकढक्याइरहेको मानिसलाई जीवनतिर फर्काउन सक्छ प्रेमले । सबैचन्दा ठूलो कुरा त प्रेमले मानिसलाई आँसुको मेलामा मुस्कानको बेलुन उडाउन सिकाउँछ । प्रेमले सपनाहरू बाँड्छ, जसले मान्छेलाई जीवनको रंगशालाभित्र खुसीको फुटबल खेल्न सिकाइरहन्छ ।
तर, प्रेमलाई कुनै जोकको रूपमा लिन्छन् मान्छेले । मजाकको रूपमा लिन्छन् । र मानिस दुःखी हुनुको कारण यही नै हो । प्रेम त आकाश हो जहाँ मान्छेहरू जति पनि उड्न सक्छन्, फैलिन सक्छन् । प्रेम त सागर हो जहाँ ,मान्छेहरू जति पनि पौडिन सक्छन् । प्रेम हरकोहीले महसुस गर्न सक्दैनन् तर जसले सक्छन् उनीहरू जिन्दगीसँग गुनासारहित भएर बाँच्न सक्छन् । तर मान्छेले प्रेमलााई व्यापारको रूपमा लिन्छन् । बजारमा बेच्छन् । मूल्यमा मोलमोलाइ गर्छन् । सबैभन्दा दुःखको कुरा यही हो । जसले मान्छेलाई हरदिन निर्जिव बनाइरहेछ । लासजस्तो बनाइरहेछ ।
प्रेम किन हुन्छ त ?
जब लाग्छ मान्छेलाई कि मलाई कोही कसैको जरुरत छ । जसले मैले रुँदा मसँगै रोइदेओस् र अंगालोमा बेरिरहोस् । म खुसी हुँदा सबैभन्दा बढी खुसीको उत्सव उसले मनाओस् । मेरा हर अप्ठ्ययाराहरूमा साथसाथै होस् र ऊसँग जीवनको यस्तो यात्रामा निस्किदिऊँ जुन यात्रा कहिल्यै नटुङ्गियोस् । मृत्युको अन्तिम सास फेर्दैगर्दा पनि जीवनप्रति कत्ति पनि गुनासो नहोस् ।
यी सब सपनाहरूले गर्दामा प्रेम हुन्छ । कोही कसैको जरुरत हुन्छ । यिनै कारणहरूले गर्दा नै मान्छेले कोही कसैलाई आफ्नो दुःखको, सुखको, हर सपनाको हिस्सेदार बनाउँछ । जसले जीवनलाई प्रेमले हेर्न सिकाउँछ ।
किन टुट्छ त प्रेम ?
जब मान्छेले एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैनन् तब सकिन्छ प्रेमको आयु । एकअर्काको हर कमजोरीलाई स्वीकार्न नसकेपछि प्रेमको अन्तिम श्रद्धान्जली हुन्छ । बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्नु र कुनै पनि खुसी शेयर नगर्नु, दुःख शेयर नगर्नु भनेको प्रेमको ढुकढुकी मात्र बाँकी रहनु हो । सानातिना कुराहरू ख्याल नगर्नु भनेको जीवनको रहस्य पत्ता नलगाउनु हो ।
यहाँ केही त्यस्ता चर्चित जोडीहरूबारे चर्चा गरिँदै छ जो वर्षौंसँगै प्रेमका उत्सवहरू मनाएर पनि अन्तिममा छुटिए । छुटिनको अनेक कारण होलान् तर छुट्टिए पनि कहिलेकाहीँ त सँगै बिताएका दिनहरू सम्झिँदा हुन् र मुस्कुराउँदा होलान् । आखेरी मान्छे न हुन् जोसँग संवेदित हुनको लागि मुटु छ र मुटु धड्किनको लागि यादहरू ।
ब्राड पिट र एन्जेलिना जोली
उनीहरूको जोडीलाई प्रेमले ब्रान्जेलिना भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थे उनका फ्यानहरूले । हलिउडमा मात्र नभएर संसारभरी नै उनीहरूका फ्यानहरूले श्रद्धा गरेर हेर्ने गर्थे । सन् २००४ मा ‘मिस्टर एण्ड मिसेज स्मिथ’ को सुटिङताका नजिकिएका थिए । त्योभन्दा पहिले उनीहरूबीच भेट भएको थिएन । मान्छेले सधैं केही यस्तो मान्छेको खोजी गरिरहेको हुन्छ जो आफ्ना हर खुसीमा, दुःखमा साथ होस् । जोसँग साथ हुँदामा आफैलाई बिर्सिन सकियोस् ।
यसपछि उनीहरू साथै रहे । यस्तो साथ कि जसलाई छुटाउन यो दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले सक्दैनथ्यो । छ जना बच्चाहरूका बाबुआमा बने । तर सम्बन्ध सधैं उही रफ्तारमा हिँडिरहँदैन । यदि घिस्रिएको खण्डमा सम्हालिन जान्नुपर्छ । यति आदर्शका साथ सम्बोधन गरिने जोडी अन्तिममा १२ वर्षको सम्बन्धलाई तिलान्जलि दिँदै २०१६ मा छुट्टिए ।
ऋतिक रोशन र सुसैन खान
१७ वर्षे प्रेम सम्बन्ध र १३ वर्षे वैवाहिक जीवनलाई ऋतिक रोशन र सुसैन खानले सन् २०१३ मा टुङ्ग्याए । दुईजना छोरा छन् उनीहरूका । बलिउडमा अमिताभ बच्चन र जया भादुरी बच्चन अनि शाहरुख खान र गौरी खानपछि आदर्श जोडीका रूपमा ऋतिक र सुसैनलाई लिने गरिन्थ्यो । तर, विवाह गरेको १३ वर्षपछि बाटाहरू फेरे उनीहरूले । प्रेममा बसैभन्दा ठूलोकुरा विश्वास हो । जब विश्वासको सानो धागो चुँडिन्छ तब अमर ठानिएका सम्बन्धहरू पनि एक निमेषमै टुक्रिजान्छन् काँचको चुराझैं । अचेल उनीहरू बेलाबेलामा भेट्ने गरेको खबर बलिउड मिडियाहरूले सम्प्रेसन गर्ने गरेका छन् ।
मनोजराज र अञ्जु पन्त
गायिका मनोजराज र अन्जु पन्त बिहे गरेको दश वर्षपछि छुट्टिए । उनीहरूलाई पनि नेपाली संगीतप्रेमीहरूले निकै आदर्शको रूपमा हेर्ने गर्थे । एउटै फिल्डमा भएको कारण धेरैले अपेक्षा गरेका थिए कि उनीहरू एकअर्कालाई सम्मान गर्छन्, प्रेम गर्छन् र सपोर्ट गर्छन् । तर समय कहाँ उही रफ्तारमा चल्दोरहेछ र समय ! घडीको काँटा उही तरिकाले चले पनि यसले आफ्नो स्वभाव फेरिरहँदो रहेछ । कहिलेकाहीँ अहम्ले पनि प्रेमको घाँटी निमोठ्दो रहेछ । प्रेमको छाती च्यात्दो रहेछ । अन्जु र मनोजको सम्बन्धको डोरी पनि सायद यही अहम्ले चुटाइदियो । उनीहरूले सँगै गाएका ‘पानीको फोकाजस्तै...’ गीतले हरेक स्रोताको छातीमा बेस्सरी हिर्कादिन्छ र नोस्टलजिक बनाइदिन्छ हरेकलाई ।
छविराज ओझा र रेखा थापा
करिब एक दशक सँगै बिताएका यी जोडी पनि अन्तिममा छुट्टिए । सँगै अनेक चलचित्रमा काम गरेका यी जोडी नेपाली सिने नगरीमा चर्चित जोडी थिए । जो सार्वजनिक ठाउँमा किस गर्न पनि पछि पर्थेनन् । तर सम्बन्धले सधैं नयाँपन खोजीरहन्छ । मीठासपन खोजीरहन्छ । हामीले त्यो दिन जरुरी छ । यदि त्यो दिन चुक्यौं भने हाम्रो प्रेम जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यही गएर टुगिंन्छ र पीडाहरू उपहारमा थपिन्छन् । जसले मान्छेलाई फेरि नयाँ यात्रा गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । अप्ठ्यारो हुन्छ । यही कारण टुगिंयो प्रेम उनीहरू जब उनीहरूले प्रेममा स्वार्थको विषदी मिसाइदिए ।
प्रेमसँग त्यस्तो के शक्ति छ ?
प्रेम यो पृथ्वीकै शक्तिशाली हतियार हो जसले एकैछिनमा तहसनहस बनाइदिन्छ र एकैछिनमा उठाइदिन्छ पनि । बस् चलाउन जान्नुप¥यो । प्रेम निर्मम हुन्छ, कुरूप हुन्छ । जब मान्छेले प्रेममा स्वार्थ मिसाइदिन्छन् । प्रेममा घमण्ड मिसाइदिन्छन् । र प्रेम सुन्दर हुन्छ, मीठो पनि हुन्छ । जब मान्छेले प्रेमलाइृ जीवनसँग जोडेर हेर्छन् । हर खुसीहरूसँग जोडेर हेर्छन् ।
सम्बन्धलाई मजवुत बनाउने ज्याकको काम प्रेमले गर्छ । तर कसरी प्रयोग गरियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सानातिना कुराहरूमा अडिएका हुन्छन् सम्बन्धहरू । जसलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने काम प्रेमले गरेको हुन्छ । यत्ति मात्रै हो कि हामीले सानातिना कुराहरूमा चियर्स गर्न सकौँ । सानातिना खुसीहरूलाई पनि उत्सव जसरी मनाउन सकौं । यत्ति चाहिँ ख्याल गरौं कि सानातिना कुराहरूले गर्दाखेरी हाम्रो प्रेमको हन्तिम श्रद्धान्जली नपुगोस् र पश्चातापको भारी बोकेर गुनासोसहितको जिन्दगी बाँच्न नपरोस् । प्रेम कुनै जोकरले सुनाउने जोकजस्तो होइन न त कुनै सर्कसजस्तो यो । प्रेम त दुःखको पहाडमा खुशी र सन्तुष्टिका गुराँस फुलाउने बसन्त ऋतु हो ।